China 7 in 1 Type- C HUB, HDMI, USB3.0, Type- C PD 100w, SD & TF, 3.5mm Audio mpanamboatra sy mpamatsy |Wellink
7 in 1 Type-C HUB, HDMI, USB3.0, Type-C PD 100w, SD & TF, Audio 3.5mm
Ampidiro: Type-C/F,Type-C PD 100w Enter
Output: HDMI 4K@30Hz,USB 3.0*2, Type-C PD 100w Enter, SD/TF card slot (manohana famakiana miaraka),Audio 3.5mm
7ao amin'ny 1 Type-C HUB,HDMI, USB3.0, Type-C PD100w,SD / TF karatra slot (manohana simultaneous famakiana), 3.5mm Audio
PD100w dia mamaly rehefa miasa tsy misy herinaratra.5Gbps fandefasana angon-drakitra haingam-pandeha;Fifandraisana avo lenta 4K amin'ny fitaovana fampisehoana isan-karazany;aluminium firaka akorandriaka, wear-mahatohitra;SD / TF karatra slot (manohana mamaky miaraka);OTG fanitarana asa, manitatra ny vaovao mety ho an'ny finday;totozy ivelany, fitendry, karatra tambajotra hilalao lalao.
Fitaovana mifanentana: (ampahany voatanisa).
Google Pixelbook na Chromebook hafa misy seranan-tsambo USB C.
Fitaovana PD 3.0 tohanana ihany:
iPad Pro 2018 (DP 1.2 tohanana);
USB 3.1 ihany no tohana fitaovana:
Fitaovana USB C hafa izay manohana ny DP 1.2 na mandeha amin'ny bateria ampy.
• Tsy azo ampiasaina miaraka ny slots karatra SD sy TF.
• Ny seranan-tsambo PD-IN (Type-C interface) dia natao ho an'ny fiampangana mandalo ihany.
• Ataovy azo antoka fa manohana USB3.1 /PD3.0 / DP1.2 ny seranan-tsambo USB C amin'ny fitaovanao mba hampiasana ny fiasa rehetra amin'ny hub.
• Rehefa feno feno ny habaka dia tsy hihoatra ny 55°C ny hafanan'ny akorandriaka.Afaka miasa ara-dalàna sy azo antoka ny Hub, raha tsy hoe mafana ny mikasika azy.
Fanontaniana:Afaka miasa amin'ny Samsung Galaxy S10 ve ny adaptatera?
Valiny:Ry mpanjifa malala, miala tsiny aho fa ny 7-IN-1 USB C HUB dia tsy mifanaraka amin'ny Samsung Galaxy S10-nao, na amin'ny Samsung Galaxy Note10.
Manantena aho fa voavaha ny fanontanianao, ary raha manana fanontaniana fanampiny ianao dia aza misalasala mifandray aminay.
Fanontaniana:Ny solosaina finday taloha dia mandeha miaraka amin'ny rafitra Win8, mbola afaka mividy ny hub ve aho?
Valiny:Ry mpanjifa malala, miala tsiny aho fa ny 7-IN-1 usb c hub dia tsy mandeha amin'ny dikan-teny OS taloha (toa ny Windows XP, Win7, Win8, Mac 10.6-10.8, Linux, sns.).Manantena aho fa voavaha ny fanontanianao, ary raha manana fanontaniana fanampiny ianao dia aza misalasala mifandray aminay.
Fanontaniana:Mila mampifandray ny seranan-tsambo PD ve aho rehefa misy seranana hafa?
Valiny:Ry mpanjifa hajaina, manoro hevitra anao izahay mba hampifandray ny famatsiana herinaratra rehefa miasa eo ambanin'ny enta-mavesatra ny hub, fa tsy ilaina izany rehefa mitondra fitaovana matanjaka ianao, toy ny klavier sy totozy.Manantena aho fa voavaha ny fanontanianao, ary raha manana fanontaniana fanampiny ianao dia aza misalasala mifandray aminay.
Fanontaniana:Ny seranan-tsambo hdmi dia tsy nahavita nampita ny haino aman-jery avy amin'ny solosaina findaiko mankany amin'ny efijery ivelany lehibe kokoa, misy torohevitra?
Valiny:Ry mpanjifa malala, azafady jereo ireto fampahalalana manaraka ireto mba hanampiana anao hamantatra ny olana:
1. Raha hampiasa ny seranan-tsambo HDMI output, ny USB-C pna ny fitaovanao dia tsy maintsy manohana ny Display Port Alt Mode.
2. Andramo amin'ny monitor hafa na tariby HDMI.
3. Ampidiro mivantana amin'ny fitaovanao ny tariby HDMI.Raha misy fifandraisana tsy milamina dia tsy miasa ny cable HDMI.
4. Hamarino fa ny monitor-nao dia namboarina miaraka amin'ny HDMI marinafampidirana.
5. Ny seranan-tsambo HDMI dia tsy mifanaraka amin'ny telefaona / takelaka MHL,anisan'izany fa tsy voafetra ho: SAMSUNG Tab A, LG Google.
Pixel2, ZTE / ZTE max pro Phone, OnePlus 2 / 3 / 3T / 5T,
Moto Z force, takelaka andiany Dell Inspiron, ASUS ZenPad S8
64GB, Nintendo Switch, sns.
teo aloha: 6 in 1 Type-C HUB, HDMI, USB3.0, Type-C PD 100w, RJ45 (Manohana tambajotra tariby 1000MB)
Manaraka: 8 in 1 Type-C HUB, HDMI, USB3.0, Type-C PD 100w, SD&TF, RJ45, VGA